Topnepalnews.com | महिला संघमा ५६ जनाका लागि १सय ३६ जनाको उमेदवारी,कुन पदमा कति ? विस्तृतमा
महिला संघमा ५६ जनाका लागि १सय ३६ जनाको उमेदवारी,कुन पदमा कति ? विस्तृतमा
Posted on: September 15, 2016 | views: 301
काठमाडौं,भदौ ३० । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघको ५६ जना कार्यसमितिका लागि १ सय ३६ जनाले उमेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन समितिले आज एक बजेदेखि चार बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरेकोमा अध्यक्षमा दुई, महासचिवमा तीन, कोषाध्यक्षमा दुई एवम् खुला, प्रदेश, दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम केन्द्रीय सदस्यमा १२६ गरी १३३ को उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । मिना पाण्डे र उमा रेग्मीले अध्यक्षमा उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । रेग्मीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको तथा पाण्डेलाई बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गरेका छन् । संघको १ जना महासचिवका लागि तीन जनाको उमेदवारी दर्ता भएको छ ।
रेग्मी प्यानलबाट सिटौला समूहकी धना खतीवडा र पाण्डे प्यानलबाट गोमा केसी तथा कुनै गुटमा संलग्न नभएकी किरण कुमारी सरकारले महासचिवमा उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । कोषाध्यक्षमा भने रेग्मी र पाण्डे प्यानलकै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । रेग्मी समूहबाट जानकी सिंह र पाण्डे समूहबाट कुसुम देवी थापाले कोषाध्यक्षमा उमेदवारी दिएका छन् ।
सङ्घको विधानअनुसार अध्यक्ष एक, महासचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, खुला केन्द्रीय सदस्य २२, सात प्रदेशबाट २१, दलित तीन, जनजाति तीन, मधेसी तीन र मुस्लिम एक पदमा निर्वाचन हुँदैछ । यसैगरी खुला २२ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि ४७ जनाले उमेदवारी दिएका छन् भने २१ जना प्रादेशीक आरक्षित केन्द्रीय सदस्यमा ५१ जनाको उमेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । प्रदेश मध्येबाट १ नम्बर प्रदेशका लागि ६ जना, २, ३ र ४ नम्बर प्रदेशका लागि ७/ ७ जना, प्रदेश नम्बर ५ र ७ बाट ९र९ जनाको उमेदवारी परेको हो ।
दलित तर्फबाट ३ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि ७ जनाले उमेदवारी दिएका छन् । यस्तै ३ जना आदिवासीर जनजातिका लागि १३ जना चुनावी मैदानमा भिड्ने भएका छन् भने ३ जना मधेसीका लागि ८ जनाको उमेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । १ जना मुस्लिम आरक्षणको व्यवस्था गरेको महिला संघमा ३ जनाले उमेदवारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा दुई हजार १६५ प्रतिनिधिले भाग लिएका छन् । दश जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गरी भाग लिएका छन् । ‘महिला सशक्तीकरणका चार निकास, समान सहभागिता, शान्ति, समृद्धि र संवैधानिक विकास’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशनमा शुक्रबार बिहान ९:३० बजेदेखि २ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम तोकिएको छ ।
महाधिवेशनमा प्रान्तीय संरचनाअनुसार ५६ सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ । विद्युतीय मतदान यन्त्रबाट मतदान हुने भएकाले शुक्रबार बेलुकी नै मत परिणाम सार्वजनिक हुने समितिले जनाएको छ ।